Hubachiisa ummata Tigarayii fi mootummaa federaala wayyaanee (TPLF)f – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHubachiisa ummata Tigarayii fi mootummaa federaala wayyaanee (TPLF)f
Camadaa Hundee irraa, Guraandhala 1, 2018
Dubbiin “kan beeka rafe tutuqaan hin dammaqsu” akkuma jedhamu ammas wayyaaneen ookkara kaasuuf waanta qophoofte fakkaata. Toftaan ookkara kaasuun, aara galfattii argachuu waggoota dheeraf TPLFf fayidaa argamsiiseefii jira. imaamata qoqodanii bituu jedhu waggaa 27f aangoorra bubbulchee jira. bu’aan isaa garuu ummata Tigrayii fi TPLFf nama wadaroo mormatti of hundee fiixee baalaa irra dhaabbatu itti ta’ee jira. ummati Tigrayi kana ni hubata jedheen yaada. Boru ni dhufaa namni hin beekne, ardha waanta quufeef boru beelli akka jiru dagata. TPLF yeroof quufoo fakkaatanis, yeroon itti beela’an guyyaan otoo hin taane, sa’aadhan lakka’amaafii akka jiru hubachuu qabu.
Baatii tokko keessatti akka gaararraa yeroo eddu dhimma hiikamuu hidhamtoota siyaasaa irratti of jijjiraa jiru. dhimmi kun akka kana duraa salphaadhumatti kan ittiin nama mookasan akka hin taane beekuu qabu. kuma kurnoota seeran ala hukkaamsanii, mooraa gidiraa keessaa waan ija nam hin quuqne hiikuudhan, isaan ummata sobuuf yaaluun daran kufaatii isaanii ariifachiisaafii jira.
Dhimma Obbo Baqqalaa Garbaa fi hidhamtootiin biroo hiikamuu dhabuun isaa biyyattii jeequmsa amaa keessa galchuuf akka deemu beekuu qabu. asirratti waanti hubatamuu qabutu jira. dhaamsi kiyya ummata Tigarayiif. Akka kana duraa jeequmsa ykn ookkara oromiyaa keessatti kaasuudhaan oromoo fi oromoo wal dura dhaabbachuun kan ka’u miti. Amma guddinni siyaasa oromoo sadarkaa bilchina qabuu fi tarsiimoo siyaasaa bu’a qabeessaan hoogganamuu jalqabee jira. kanaaf oromoo fi oromoon yeeroo itti wal ajjeesuu fi wal hidhu seenaa ta’aa jira. kanaaf kana booddee xiyyeeffannaan qabsoo oromoo diinaa fi diina duwwaa irratti ta’a.
Garuu ummati Tigrayi ilmaan oromiyaa fi saba biraa waggaa 27f yeroo ajjeefamaa, hidhamaa fi qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqa’an cal jedhanii ilmaan isaanii (TPLF) ilaaluun saba biraa biratti qurruma dhalchee jira. maqaa ummata Tigrayiin da’eeffatanii yeroo saba biraa samanii fi ajjeesan ummati Tigrayi callisuu filachuun isaa gatii guddaa isa kaffalchiisuuf deema. Kanaaf saamtotaa fi yakkamtootaaf da’oo ta’ee balaa dhuma hin qabne irraa of baraaruun murtee ummata Tigarayi ta’uu qaba.
Akeekkachiifni barruu kana keessatti hubachiisuu barbaadu, ummata Tigarayi. Obbo Baqalaan yeroo ammaa fayyummaan isaa sadarkaa yaaddessaa irra jira. akkasuma hidhamtootiin edduu kan ummata biratti beekamanii fi gaaffii mirgaa gaafataniif jecha mana hidhaa keessatti ugguramanii jiran kumaatamaan jiru. kanaaf atatamaan yoo gadhiifamuu baatan balaan ummata Tigray irra ga’uuf deemu tilmaamuun nama hin dhibu. Kanaaf akka kana duraa jeequmsi sababa kanaan oromiyaa keessatti ka’uu malu oromoo fi oromoo gidduuti akka ta’uuf hin malle beekuun gaarii dha. kanaaf jecha TPLF akka atatamaan hidhamtoota kaampii gidaraa keessaa ummataaf gadhiisan ummati Tigaray akka gahee isaa bahu waamicha godha.
Oromiyaan Sodaa qawwee jalaa of bilisoomsuu ishee beekuun gaarii dha. ummati bilisummaaf susuku gufuun kamuu akka dhaabuu hin dandeenye beekuun gaarii dha. kana beekuun egeree waloof akka ijoollee isaa (TPLF) abboommatu ummata Tigarayiif waamicha taasisa.
ONN - Atakaaroon TPLF fi ADP Waa'ee EPRDF, Waa'ee Jijjiiramaa fi Egeree Biyyattii
ONN LIVE - Atakaaroon TPLF fi ADP Waa'ee EPRDF, Waa'ee Jijjiiramaa fi Egeree Biyyattii ONN…
SBO Sagalee Bilisummaa Oromo, Guraandhala 2, 2018